Denmark: Sadex nin soomaali ah oo loo xukumay gacan-qaad ka dhacay baar lagu caweeyo. - NorSom News
Denmark: Sadex nin soomaali ah oo loo xukumay gacan-qaad ka dhacay baar lagu caweeyo.
Maxkamada magaalada Aalbark ee dalka Denmark ayaa sadex nin oo soomaali ah ku xukuntay gacanqaad ka dhacay goob baar ah oo habeenkii lagu caweeyo. Waxaana sadexdan lagu eedeeyay inay gacanqaad u geysteen nin 20-meeyo jir ah.
Maxkamada ayaa mid kamid ah sadexda nin ku xukuntay sanad iyo bar xabsi ah, halka labada kale lagu xukumay mid sanad xabsi ah.
Markhaatiyaal dhowr ah ayaa maxkamada kahor sheegay in Mid kamid ah ragga la xukumay uusan qeyb ka aheyn gacanqaadka meesha ka dhacay, balse maxkamada ayaa hadana ku xukuntay saameyn ku lahaa falka dhacay.
Xigasho: Kilde: Tre mænd dømt for groft overfald på 20-årig.
Previous articleSu´aal ma weydiin laheyd wasaaradda caafimaadka? Maxaad maanka ku heysaa?
Next articleFaransiiska: 18-jir mindi ku gawracay wax ka sheegay Nabi-Muxamed.